मेसिन थप्न किन ढिलाइ ? – Sajha Bisaunee
मेसिन थप्न किन ढिलाइ ?
साझा बिसौनी सम्पादकीय । २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:०२ मा प्रकाशित
सबैभन्दा ढिला संक्रमित भेटिएको कर्णाली प्रदेशमा यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ६ सय नाघिसकेको छ । एकातर्फ दैनिक दर्जनौं नयाँ संक्रमित थपिँदै गएका छन् भने अर्कोतर्फ परीक्षणको गति निकै सुस्त छ । आरटी–पीसीआर परीक्षणका लागि संकलन गरिएको नमूना स्वाब प्रयोगशालामा चाङ लागेको छ । स्वाब लिएको १० दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउने अवस्था छ । यसले संक्रमितको संख्या एकिन गर्न र उनीहरूको उपचारमा चुनौती देखिएको छ । सँगसँगै संक्रमण अन्यमा सर्ने र फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।
पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या बढेसँगै स्थानीय तहले स्वाब संकलनलाई पनि तीव्र बनाएका छन् । धमाधम स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउन थालिएको छ । तर प्रयोगशालाको गति भने सुस्त छ । कर्णालीका दश जिल्लाको परीक्षण भार सुर्खेत र जुम्लास्थित प्रयोगशालाले थेग्न नसकेपछि परीक्षणमा ढिलाइ भएको हो । अहिले प्रदेशमा दुई वटा मात्र मेसिनले परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश अस्पतालले पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा राखेको एउटा र अर्को कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कोरोनाको परीक्षण गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको हो । सुर्खेतमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी छ । प्रयोगशालाका अनुसार दैनिक १८ घण्टा काम गर्दा तीन सयसम्म स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ । जुम्लामा पनि एक हजारको हाराहारी स्वाबको परीक्षण गर्न बाँकी छ । यता प्रयोगशालामा बढ्दो चापका कारण स्वाबको चाङ लागिरहँदा विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा भएकाहरू भने हप्तौदेखि रिपोर्टको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अर्को समस्या पनि निम्त्याएको छ । दुई साताभन्दा बढी समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू धमाधम घर जान थालेका छन् ।
संक्रमितलाई आइसोलेसनमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय जिल्लामा आइसोलेसनभन्दा संक्रमितको संख्या धेरै भइसकेको छ । जसका कारण उपचारमा समेत समस्या आएको छ । परीक्षण सुस्त हुँदा प्रयोगशालामा विभिन्न जिल्लाबाट पठाइएका नमुना स्वाब थन्किएका छन् । रिपोर्ट आउन ढिला भएपछि क्वारेन्टाइन बसिरहेकाहरू त्यतिकै घर फर्कन थालेका हुन् । यसरी पीसीआर रिपोर्ट नआउँदै घर पठाउन थालिएपछि समुदायमा संक्रमण फैलने खतरा पनि बढेको छ । रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा घर पुगिसकेपछि संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ । यस्तै गाउँघरका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन् ।
धेरै जनालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । त्यसमाथि परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टाइनमा भएकामध्ये कसैमा संक्रमण रहेछ भने अरुमा सर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आर्थिक भार पनि थपिएको छ । त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाउन परीक्षण मेसिन थप्नुको विकल्प छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आवश्यक आरटी–पीसीआर परीक्षण मेसिन थप्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने निश्चित छ ।